Iyo Fed inogadzira iyo kosi yemisika yemasheya | Ehupfumi Zvemari
Iyo FED inoisa kosi yemisika yemasheya
Iko kushanduka kwemisika yepasi rose yemari yakatarwa nezvakataurwa nemutungamiri wepamusoro weFederal Reserve yeUnited States kuti sei shanduko yezvibereko zvemitero kubva zvino zvichienda mberi. Mushure memutemo une hukasha muna Zvita wakakonzera kudzikira kwazvino pakati pevamiriri vemari. Kuvhara gore rapfuura pamatanho aro akaderera uye netarisiro yerudzi urwu yemisika yemari.
Huye, chirevo chitsva kubva kumubatanidzwa wemari weUS chinoratidza kuti ichakwanisa kuenderana nezviitiko zvitsva zvinogona kubuda muhupfumi. Kunyanya, ivo vakati ivo vanozove vanokwanisa kuchinjika pane kusvika parizvino mukukwira kunooneka kwemitero. Kuratidza kuti chikamu chayo chakakwanisa kusvika kune zviyero zvinodiwa. Sezvinei, pakati pezviuru gumi kusvika gumi nemazana masere yakakosha, asi pasina kuongorora mune izvi zvinokwira zvine kunetsekana misika yemasheya kutenderera pasirese.
Semhedzisiro yeichi chiitiko chitsva muAmerican mutemo wezvemari, maitiro mumisika yemari haina kunge yakareba kuuya. Iko kukwira mumasheya indices kwave kwakanyanya kwazvo uye zvinoita sekudaro humwe tariro yakaiswa mumasarudzo evashambadzi vadiki nepakati. Nekuwedzera uko mune dzimwe nguva kwasvika mazinga e5% mumazuva mashoma ekutengesa.
1 Iyo FED inoita iyo Ibex 35 kuita
2 Kutya kuderera kwenyika
3 Chii chingaitwe mwedzi iyi?
4 Yakavhenganiswa mari yekudyara
5 Inogona kuve musungo wemisika
Iyo FED inoita iyo Ibex 35 kuita
Mhinduro mumazuva ano ekutanga enyowani yakave yakanakisa pachikamu cheinosarudzika indekisi yemunyika. Kusvika padanho rekudarika rakakosha rutsigiro urwo Ibex 35 pamakumi masere nemazana manomwe ezviuru uye mushure mekurova pamapoinzi mazana masere nemazana matatu Kwave kuri iko chaiko hunhu hwebhengi chikamu chakatungamira uku kuwedzera. Izvo hazvigone kukanganwika kuti anga ariwo akanyanya kubatwa nemakambani mukati megore remari rapfuura.
Kune rimwe divi, izvi dziite izvo zviri kuitika mumwedzi wekutanga wegore zvinogona kutungamira kumatunhu akakwirira mukuumbwa kwemitengo yemigove. Nekudaro, kusahadzika kukuru kwekuti vaongorori vemusika wemari vane mari ndeyekuti kufamba uku mumusika wemasheya kuchange kwakanangana here kana kuti, nekupesana nako, kunogona kuwedzerwa mukati megore rose. Chero zvazvingaitika, kusahadzika ndicho chinhu chinowanzoitika kune vazhinji veavo nyanzvi mune izvi zvemari.
Chero zvazvingaitika, mumisika yemari kune njodzi yekuti pachave ne kushaya mari yakakosha kukosha. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kubva kuFED zvinokanganiswa kuti aya mafungiro asina kunaka ari pamberi peiyo macroeconomic dhata iri kupihwa mumwedzi yapfuura. Chero zvazvingaitika, ndiwo mamiriro ezvinhu ayo vashoma nevapakati varimimari vanofanirwa kurarama kubva kune chaiwo nguva. Nekuti vanogona kurasikirwa nemari yakawanda mukushanda kwavo mumisika yemari uye paisazove nesarudzo kunze kwekuchengetedza capital inowanika yekudyara.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti dhata dzazvino nezviratidzo zvehupfumi hweChinese hazvina kunaka. Kusvika padanho rekuti ivo vari kuzivisa a chibvumirano mukukura mumatunhu avo anobereka. Mupfungwa iyi, hapana sarudzo asi kunyatsoteerera kushanduka kweaya mamiriro ezvehupfumi kuti uone kana iri nguva yakanaka yekutenga masheya kana kana, nekusiyana, zviri nani kuve mune mvura mamiriro kuti uzvidzivirire kubva pazviitiko zvakashata kwazvo mumisika. mari inoshanduka. Kunyanya, nekuda kwekusagadzikana kukuru uko kunogona kuiswa mumutengo wekuchengetedzeka.
Chii chingaitwe mwedzi iyi?
Zano rekutarisana nemazuva ekutanga egore idzva hakusi kuzviburitsa pachena kumisika yemari. Mupfungwa iyi, zano rakanakisa rinogona kunge rakavakirwa pakutsvaga imwe mari yekudyara. Hunhu hwezvigadzirwa izvi hwakafara kwazvo uye nekudaro unogona kutora mukana wezvimwe zvezvinhu zvacho.
Izvo zvakakosha, kana mari dzekudyara dzichaendeswa kune iyo yepakati nepakati, kune yakanyatso tsanangurwa chimiro chemusimari: anozvidzivirira mushandisi uyo asingade kuisa mari yake pane zvigadzirwa zvechivanhu zvebhengi. Semuenzaniso, yakatarwa-nguva dhipoziti, bhizinesi manotsi uye mahara-anobhadhara maakaundi.
Chirevo chinoshanda kwazvo kana izvi zvinowedzera zvakachengetedzwa mumusika wemasheya zvinomiririrwa nemari dzekudyara dzinovakirwa pamari. Ivo ndeavo vane mukana wekuwana misika yemari, zvese mumisika yenyika neepasi rese. Saka kuti nenzira iyi, unogona kusiyanisa mari yako uye haufanire kungozviganhura kumusika mumwe chete wemari kana chengetedzo imwechete. Kunyangwe iri kirasi rekushanda rinotakura njodzi yakawanda nekuda kwekushomeka kwemisika yemari iyi.
Chero zvazvingaitika, kana iwe usiri kuda kuzviisa pachena zvakawandisa kumusika wemasheya, imwe yesarudzo dzakanakisa inoitwa kuburikidza nemari yakavhenganiswa. Hazvishamisi kuti ndeavo vari mukati mawo sanganisa zvinhu zvakasiyana siyana zvemari, senge kuenzana uye zvakatemwa zviwanikwa zvemari. Mune zviyero zvinogona kusiyana zvichienderana nezinga re njodzi ivo vatengesi pachavo vanoshuvira kutarisana navo. Icho chigadzirwa chakanakisa chekudzora njodzi uye kuvapo mumisika yemari inonyanya kukosha. Nemafomati emarudzi ese uye zvisikwa. Mune yakajeka emergency mune chinodikanwa chevashandisi vemari nekuda kwekureruka kwemamodeli avo ekubvumirana.
Inogona kuve musungo wemisika
Chero zvazvingaitika, usatakurwa netariro mune yemusika wemusika mazuva ano ekutanga egore. Inogona kunge iri musungo wekuwedzera kukwezva huwandu hukuru hwevashambadzi vadiki nepakati. Mushonga chete wekuziva ndewekuti Ibex 35 inogona kudarika zvakakwana mwero wemapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana maviri uye kuti yaizopa chiratidzo chakajeka chekutenga muzvikamu zveSpanish. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo FED inoisa kosi yemisika yemasheya
Subsidiary Mutoro wevadikani mumhando dzemakambani